बीआरआईमा सामेल हुने विषय नेपालको राष्ट्रिय सहमति हो
‘सी विचारधारा’ चीनको सन्दर्भमा ल्याइएको दिग्दर्शन भए पनि अहिले यो बहस नेपालमा सुरु भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच भर्खरै काठमाडौंमा सम्पन्न वैचारिक अन्तर्क्रियापछि यो विषय अझ चर्चामा आएको हो । दुवै देशमा कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा रहेको सन्दर्भमा सी विचारधाराबारे छलफल हुनुलाई अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ । यद्यपि भिन्न भूगोल, भिन्न राजनीतिक प्रणाली र भिन्न संस्कृति अपनाइरहेका मुलुकमा यो केवल बहस मात्रै भएको र अनुसरण गर्ने विषय नभएको केही कम्युनिस्ट नेताहरूको तर्क छ । यसै सन्दर्भमा चीनका लागि पूर्वराजदूत तथा नेकपा नेता टंक कार्कीसँग शिलापत्रका लागि प्रदीप बस्नेतले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, नेता कार्कींसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अहिले चीनले अवलम्बन गर्न खोजेको ‘सी विचारधारा’ बारे व्यापक चर्चा छ । खासमा यो के हो ?
विकासको चुनौती र सम्भावनाका बीचमा चीन कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने मार्गचित्र नै सी जिन पिङ विचारधारा हो । यो चिनियाँ अग्रगतिको दिग्दर्शन हो । चीनलाई आजको विश्वसन्दर्भमा अगाडि बढ्नका निम्ति तयार पारिएको उनीहरूको रोडम्याप हो । चिनियाँहरु यसलाई नयाँ युगको निम्ति चिनिया चरित्रसहितको समाजवाद सम्बन्धी विचारको रुपमा प्रस्तुत गर्दछन् । योभन्दा बढी सी पथबारे बुझ्न आवश्यक छैन ।
यो मार्गदर्शन विचारधाराको रूपमै विकास भएको हो ?
आफ्नो मार्गदर्शन, आफ्नो दिशा के हो ? गन्तव्य के हो ? यसका साधन केके हुन् ? यसले कसरी काम गर्छ भन्ने यावत प्रश्नहरूको संश्लेषणसहितको कार्यक्रम नै सी विचारधारा हो ।
त्यसो हो भने यसको कार्यक्रम के हो ? सी विचारधाराका विशेषता के के हुन् ?
चीनको पुनर्संरचनापछि चीनमा सुधार र खुलापनपछि लगानी र निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रमा जोड दिइयो । त्यसले एक खास कालखण्डसम्म राम्रो नतिजा दियो । त्यो विकास रणीतिले चीनमा दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर कायम गरायो ।
हुँदाहुँदा संसारको सबभन्दा ठूलो विदेशी मुद्रा सञ्चय पनि चीनसँग भयो । ट्रेड पनि बढ्यो । औद्योगिक आधारहरू स्वतः विकास हुने नै भए । तर, लगानी र निर्यातमा मात्र भर गरिएको हिजोको आर्थिक मोडेल अहिलेको सन्दर्भमा दिगो हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।
किनभने पश्चिमा बजार पनि आर्थिक समस्यामा पर्‍याे । उसको बजार संकुचनमा छ । यो परिवर्तित सन्दर्भमा चिनियाँहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्नुपरेको छ ।
चीन आफैमा १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको बजार आफैंमा ठूलो बजार हो । आफ्नो बजारका सम्भावनालाई भायविलीटीलाई उपयोग गर्नका लागि आनन्तरिक उपभोगलाई बढाउन आर्थिक रणीतिलाई पुननिर्देशन जरुरी थियो ।
अर्को कुरा, प्रचलित उत्पादन तरिकामा नवप्रवर्द्धनकारी प्रयोगमार्फत उत्पादनको गुणस्तरलाई बढाउन पनि जरुरी थियो । अर्को तेस्रो पक्ष भनेको आन्तरिक दवावका साथै हिजो जस्तो वस्तु मात्र उत्पादन गर्ने होइन ।
अब इनोभेटिभ (सिर्जनशील) प्र्रविधिको प्रयोगमार्फत उत्पादनको गुणलाई पनि विस्तार गर्नु जरुरी थियो । यसका साथै नवउदारवादी विश्व व्यवस्थाका नकारात्मक परिणाम पनि यसबीचमा प्रस्ष्टरूपमा देखिन थाले । उत्तर र दक्षिणबीचको असमानता र देशभित्रै पनि धनी र गरिवबीच खाडल बढ्न थाले । विश्वमा देखिएको यो प्रवृतिलाई पनि सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
सम्पत्तिमा थोरै मान्छेको हात हुन थाल्यो । केही शक्ति राष्ट्रका कर्पोरेशनसँग सम्पत्ति थुप्रिन पुग्यो । यो दिगो विकासको आर्थिक मोडल होइन । अर्को कुरा, त्यो विकासको मोडलले पर्यावरणमा जुन नकारात्मक प्रभाव पारेको छ, यो निकै भयावह छ ।
यी विषयलाई दृष्टिगत गरेर चिनियाँहरूले आफ्नो दर्शनमा नै परिवर्तन ल्याएका छन् । सी जिन पीङले समस्त मानव जातिका निम्ति साझा भविष्य भएको समुदायको अवधारणा अघि सारेका छन् । यसको सार हो विकासको प्रक्रियामा एकथरीले लाभ लिने र अर्कोले घाटा व्यहोर्ने स्थिति उत्पन्न हुनुहुँदैन । सबैलाई विनविन हुने परिस्थिति हुनुपर्छ ।
आजभन्दा धेरै अगाडि माओले प्रभुत्ववादको विरोध गरेको प्रसँग सम्झनु आवश्यक छ । उनले तेस्रो विश्वका नेताहरूलाई भनेका थिए, भोलि चीन बलियो भएर पछिको नेतृत्वले यदि प्रभुत्ववादको अनुसरण गरेछ भने तपाईंहरूले त्यसको विरोध गर्नुपर्छ । आज पनि चिनियाँ नेतृत्व प्रभुत्ववादको अनुसरण गर्नु हुँदैन र हामी गर्दैनौं भनेर दोहोर्‍यारहेका छन् ।
उत्पादन र वितरणमा मार्क्सवादी र पुँजीवादीहरूको विगतमा छुट्टाछुट्टै अवधारणा रहेका छन् । मार्क्सवादीहरू वितरणमा जोड दिन्छन् भने पुँजीवादीहरू उत्पादनमा जोड दिन्छन् । अहिलेको सी विचारधाराले दुवैलाई एकैचोटि अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । यदि यसो हो भने यसको प्रक्रिया र मोडल के हुन्छ ?
पुँजीवादीहरुले नाफाको निम्ति उत्पादन गर्ने हो । पुँजीवादी उत्पदान प्रक्रियामा सम्पत्तिको स्वाम्तिव केन्द्रीयकरण हुँदै जान्छ । जसका दुस्परणाम विश्वभुक्तभोगी छ ।
चीनको सन्दर्भमा समाजवाद निर्माण गर्ने प्रक्रियामा उत्पदान र वितरणलाई तेङ स्यायो पिङकै पालादेखि सँगसँगै लैजान सकिन्छ भनेर अभ्यास गरेको देखिन्छ । यद्यपि हामीकहाँ छिपछिपे मार्क्सवाद बुझ्नेहरूबाट वितरणको पक्षलाई मात्रै व्याख्या गरियो ।
कुरो रोटीका टुक्रा बाँड्ने मात्र होइन, त्यसको साइज बढाउने पनि हो । समाजवाद गरिबीको वितरण होइन, सम्पन्नताको अंशियारी हो । त्यसैले दिगो आर्थिक मोडल भनेको उत्पादन वृद्धि र वितरणलाई सँगसँगै लिएर जाने मोडल हो ।
उसो भए सीको विचारले माओको समाजवादलाई विचलित गर्‍याे कि समृद्ध बनायो ?
सीको विचार चिनियाँ विचार प्रणालीको पछिल्लो कडी हो । जहाँ माओविचारधारा, तेङ स्यायो पिङ सिद्धान्त लगायत विभिन्न पिँढीले विकास गरेका विचारहरुको सम्मान गर्दै नयाँ पिँढीले विचार श्रृंखलामा थप इँटा थप्दै आएको छ ।
चिनियाँहरू माओत्सेतुङका मात्र होइन, कतिपय सन्दर्भमा कन्फ्युसियस र लाओत्सेका विचारलाई पनि अनुसरण गरिरहेका छन् । चीन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो । तर, धर्मका कतिपय सामाजिक दायित्वलाई समेत उनीहरू उपयोग गरिरहेका छन् । नत्र त्यति विधि बौद्धविहार किन बन्थे ? उनीहरू व्यावहारिक हुन्, नारावादी होइनन् ।
खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाएको सन्दर्भमा निजीक्षेत्रलाई राज्यले नियमन गर्ने सी विचारधाराको मोडालिटी के हो ?
चीनमा निजीक्षेत्रको चर्चा गरिरहँदा बिर्सन नहुने कुरा के हो भने चीनमा विकसित पुँजीवादी अवस्थाबाट गुज्रिएर समाजवाद निर्माण भएको होइन । ७० वर्षअघि मात्रै चीन अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती अवस्थामा थियो ।
पुँजीवादको निम्छरो अवस्था थियो । एकातिर निजी उत्पादन प्रणालीको वर्चस्व र स्वामित्वको ध्रुवीकरण थियो । त्यस्तो अवस्थामा समाजवादको निर्माण थालिएको हो । त्यस्तो अवस्थामा चीनमा उत्पादनको र स्वामित्वको सामाजिकीकरण गर्ने समाजवादको अभ्यास भएको थियो ।
त्यसैले समाजवाद निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा निजीक्षेत्र जस्तो पुँजीवादको जन्म जिन्ह रहनुलाई मार्क्सवादी प्रस्तावनामा अन्यथा मानिदैन । स्वयम् लेनिनले अक्टोबर क्रान्तिपछि नयाँ ‘आर्थिक नीति’ अवलम्बन गरेको कुरा यहाँ स्मरणीय छ ।
चीन सन १९४९ मा सामन्तवाद र उपनिवेशवादबाट मुक्त भयो । त्यसपछि ७ वर्ष लगाएर नयाँ जनवादी आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको काम पूरा गर्‍याे र समाजावदी रुपान्तरणमा प्रवेश गर्‍याे ।
उत्पादन प्रक्रिया र स्वामित्व व्यवस्थामा सामाजिकीरण गर्ने काम एकैचोटि नभएर क्रमशः प्रक्रियामा लिएर जानुपर्ने चेत चीनमा १९७८ पछि आएको हो । यो विचारलाई चीनले तेङ स्यायो पिङ सिद्धान्तमा सूत्रवद्ध गरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको वर्चस्वभित्र निजीक्षेत्रको भूमिकालाई पनि समाजवादको प्रारम्भिक चरणमा स्थान दिनुपर्छ भनेर चिनियाँहरू त्यसयता अभ्यास गर्दै आएका छन् ।
तर त्यसले त चीनमै पनि विलिनियरहरूको संख्यामा वृद्धि गर्‍याे नि ?
चीनको अर्थतन्त्रको जुन आकार छ, निजीक्षेत्रको स्थान सानो छ । चीनमा सार्वजनिक क्षेत्रकै वर्चस्व छ । निजीक्षेत्रलाई नियमन गर्ने ट्याक्सलगायतका अनेकौं संयन्त्रहरू क्रियाशील छन् ।
उसो भए सी विचारधारा कम्युनिस्ट आइडियोलोजीका रूपमा विकसित भएको हो ?
यो मार्क्सवादभन्दा भिन्न पनि त होइन । मार्क्सवाद लेनिनवादको फ्रेमवर्कभित्र रहेर चीनको सन्दर्भमा व्याख्या गरिएको विचार हो ।
सी विचारधारालाई नेपालको सन्दर्भमा हेर्न सकिने ठाउँ छ ?
अहिलेको सन्दर्भमा सी विचारधारा चीनको सन्दर्भमा मात्रै हो । नेपालको सन्दर्भ बेग्लै हो । हाम्रो राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक, सामाजिक अवस्था र व्यवस्था भिन्न छ । हाम्रो संस्कृति भिन्न छ ।
चिनियाँहरू समाजवादको निर्माण गरिरहेका छन् । हामीहरू समाजवादउन्मुख दिशामा छौं । चीन र हामीबीचमा केही त्यस्ता भिन्नताहरू छन्, जसले त्यसलाई कार्वन कपी गर्न दिँदैन ।
उनीहरूको विकासको गति र हाम्रो विकासको गति मिल्दैन । उनीहरू र हामीबीचको संस्कृति, राजनीतिक प्रणालीबीचमा भिन्नता छन् । हामी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा छौं भने उनीहरू सहयोगात्मक राजनीतिक प्रणालीमा छन् ।
सीको उदयसँगै विश्व राजनीतिमा चीनको उपस्थिति जबर्जस्त भएको छ । विस्तारै पश्चिमा शक्ति ओरालो लाग्ने र एसियाको उदय हुँदैछ भन्ने र त्यसको पनि केन्द्र वा नेतृत्वमा चीन हुँदैछ । छिमेकमै हुन गइरहेको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको फाइदा नेपालले कसरी लिन सक्छ ?
विश्व उथलपुथलपूर्ण तबरबाट गुज्रिरहेको छ । प्रचलित विश्व व्यवस्था चरमराइहेको छ । प्रचलित पुँजीवादी प्रणाली संकटबाट गुज्रिरहेको कुरा चिन्तकहरू बताइरहेका छन् ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकसित दुई धुर्वीय विश्व व्यवस्था सोभियत संघ र पूर्वी यूरोपको विघटनपछि अन्त्य भयो । इराक तथा अफगानिस्तान युद्धपछि देखा परेको अमेरिकी नेतृत्वको एकल धुर्वीय विश्व व्यवस्था पनि निरर्थक बन्दै गइरहेको छ ।
यो आफैैंमा धान्नै नसकिने र खर्चिलो भएर गएको छ । नजानिदो ढंगले विश्वव्यस्था बहुधुर्वीय व्यवस्थातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । चीनलगायत कतिपय विकाशील मुलुकहरूको उदय भइरहेको छ ।
उदयशील राष्ट्रहरूको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेर विश्वव्यवस्थामा दिगोपन सम्भव छैन । विश्वको मूल प्रवृत्ति भनेको साझा विकास र शान्ति नै हो ।
विश्वमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक मुद्दासँगै पर्यावरणीय चुनौती पनि मुख्य मुद्दा बनेको बेलामा यसको विकासलाई सम्बोधन हुने सी विचारधाराको मोडल र कार्यक्रम के देख्नुहुन्छ ?
वातावरणीय परिवर्तन आज विश्वको ठूलो समस्या र चासोको विषय हो । ओजन होलको समस्या र हिम क्षेत्र पग्लिने क्रम बढिरहेको छ । त्यसले ल्याउने भयावह समस्याको बारेका दुनियाँ चिन्तित छ ।
वातावरण परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दामा चीन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दृढतापूर्वक उभिएको छ । आफैंभित्र ग्रिन टेक्नोलोजीलाई विस्तार गर्न एफोरस्टेशनलगायतका कार्यक्रम र पेट्रोलबाट चल्ने साधन विस्थापित गर्दै वैकल्पिक ऊर्जामा चीन प्राथमिकताका साथ लागी परेको छ ।
त्योसँगै चीनको पुरानो रेशम मार्ग वा अहिलेको बीआरआई परियोजनालाई पनि महत्त्वाकांक्षी योजनाको रूपमा चीनले राखेको देखिन्छ । यो परियोजनामा नेपालले लाभ लिने ठाउँ कहाँ छ ?
शिल्क रोडमा नेपालको संलग्नता अहिलेको होइन, धेरै पुरानो हो । जति बेला शिल्क रोडको जगजगी थियो, त्यतिबेला पनि हामी सामेल थियौं । ऊबेला पनि अहिलेको कोरला नाका हुँदै जुम्ला, हुम्ला हुँदै काश्मिर र अरब जाने एउटा मार्ग थियो ।
शिल्क रोडको अर्को मार्ग सातौं शताब्दिको मध्यतिर चिनियाँ राजदूत दोलखा हुँदै नेपाल आएका थिए । जनश्रुतिका मञ्जुश्री पनि त्यही बाटो हुँदै आएका हुन् भनेर भनिन्छ । आजको सन्दर्भमा सडक मार्ग मात्र होइन, रेललगायत माध्यमबाट पनि जोडिनुपर्छ ।
नेपाल र चीनबीच रेल सञ्जालबाट जोडिनाका बहुआयामिक लाभहरू छन् । तत्कालका लागि यसबाट पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लाभ हासिल हुन सक्छ । अहिले ल्हासामा ९० बढी लाख पर्यटक आउने गरेका छन् । ल्हासा र काठमाडौं छोटो दूरीमा छन् ।
त्यहाँ आउने १० देखि २० प्रतिशत मात्रै पर्यटक रेलको उपयोग गरेर नेपाल आउँदा त्यसको लाभ यसै पनि ठूलो हुन्छ । अहिले नेपालको पर्यटन क्षेत्र गुल्जार हुनुमा चिनियाँ पर्यटकको भूमिका हामीले सबैले महसुस गरेका छौं ।
बीआरआईमा नेपाल सामेल हुने नेपालको राष्ट्रिय सहमति हो । बीआरआईको समझदारीपत्रमा कांग्रेस राप्रपासहितको तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले हस्ताक्षर गरेको हो ।
तत्कालीन नेकपा एमाले त्यसको पक्षधर शक्ति नै हो । रेलको उपादेयता नदेख्ने शक्तिहरूले कोदारी राजमार्गका लाभहरूलाई सम्झे मात्रै पनि पर्याप्त हुन्छ ।
अन्त्यमा, केही दिनमै राष्ट्रपति सी जिन पिङको नेपाल भ्रमण हुँदैछ । यो भ्रमणमा नेपालमा प्राथमिकता र मुद्दा के हुनुपर्छ ?
नेपालमा चिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमणको सिलसिला नेपाल–चीन सम्बन्ध स्थापना भएलगत्तै सुरु भएको हो । चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाओ एनलाईले नेपालको दुई पटक भ्रमण गरेका थिए । चिनियाँ वरिष्ठ नेता तेङ स्यायो पिङले सन् १९७८ नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको तहमा नेपाल भ्रमणको थालनी भने राष्ट्रपति लि सिएन नियनले १९८४ मा गरेका थिए । त्यसपछि १९९६ राष्ट्रपति ज्याङ जमिनले गरेका थिए । त्यसयता २००१ प्रधानमन्त्री झु रु झि र २०१२ प्रधानमन्त्री वेन झ्या वाओले नेपाल भ्रमण गरेका छन् ।
यसरी विगत २३ वर्षमा चिनियाँ राष्ट्रपतिकै तहमा भने नेपाल भ्रमण भएको छैन । त्यसो नहुनुको पछाडि आन्तरिक राजनीतिक कारण नै हो । अब मुलुकमा राजनीतिक स्थितरता भएको र एक सुमधुर असल छिमेकी सम्बन्ध भएको मुलुकको हैसियतमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुनु नितान्त स्वाभाविक र सामयिक छ ।
यस भ्रमणबाट नेपालले पर्याप्त लाभ लिन सक्छ । चीन नेपालको भरपर्दो र ठूलो विकास साझेदार मुलुक पनि हो । चीन नेपाललाई सहयोग गर्न उत्सुक पनि छ । भर्खरै नेपाल भ्रमण आएका चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालले छानेको र प्राथमिकता दिएको परियोजनामा सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताएका छन् ।
अब बल हाम्रो कोर्टमा छ, हामीले हाम्रा आवश्यकताका परियोजाहरू निश्चित गरेर तिनको प्राथमिकतासहित आग्रह गर्‍याैं भने चीन नेपाललाई मद्दत गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध देखिन्छ ।
त्यसका लागि नेपालले बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र रहेर प्रस्तावित गरेका परियोजनाहरूको प्राथमिकता हेरी एप्रोच गर्नु राम्रो हुन्छ ।
अहिले मिडियामा चर्चा भएअनुसार केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग, रसुवागढी काठमाडौं सडक मार्ग, अरनिको (कोदारी) राजमार्गको स्तराेन्नति किमाथान्का र कोरला नाका खोल्ने विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, अपर अरुण र तमोर जलविद्युत आयोजना र काठमाडौं रिङरोडको बाँकी भागको विस्तारका परियोजना सी जिन पिङको भ्रमणमा नेपालले प्रस्ताव गर्ने चर्चा छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १०, २०७६, २१:३१:००